Wararka Maanta - Garsoor.net - Garsoor is the most trusted online media in Somalia
Category Archives: Wararka Maanta
Shirkado Finland ka yimid iyo kuwa Soomaali ah oo shir uga furmayo Muqdisho
Shirkado Finland ka yimid iyo kuwa Soomaali ah oo shir uga furmayo Muqdisho Shirkado Finland laga leeyahay iyo kuwa Soomaali ah ayaa waxaa u furmaya shir maalgashi iyo iskaashi oo ku aadan ganacsiga su’aalaha badan ka taagan yihiin ee adeegyada ammaanka iyo kalluumeysiga. Warar ku dhow shirka ayaa sheegaya in dhinaca Finland ay ka yimaadeen shirkado ka soo shaqeeyay...
Reer Muqdisho oo markale calanka is cafis sare u qaaday
Reer Muqdisho oo markale Calanka CAFIS sare u qaaday Muqdisho 11.1.2019 Ku dhowaad saddex sanno ka hor ololaha CAFISKA Soomaaliyeed oo ay billaabeen Suxufiyiin, aqoonyahanno iyo nabad-jirayaal Soomaaliyeed ayaa waxaa uu hadda gaaray sida uu sheegay Wali Xaashi oo ah fikradda Ololahan shakhsigi keenay heer la xakameyn waayo Shacabka Soomaaliyeed ee isugu soo baxaya...
92 Xildhibaan oo mooshin ka gudbiyay madaxweyne Farmaajo
Ku dhawaad 92 xildhibaan ayaa maanta saxiixay mooshin xil ka qaadis ah oo ay ka gudbiyen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Xildhibaannada mooshinka ka gudbiyay madaxweyne Farmaajo ayaa Ku eedeyay qayaano Qaran iyo inuu jibiyay sharciyo dastuuri ah. Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxman ayaa maanta qabtay mooshinka. Dastuurka Soomaaliya...
Qaraxyo ka dhacay Muqdisho oo dilay in ka badan 30 qof
Ugu yaraan 30 qof ayaa Ku dhimatay seddex qarax oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Laba kamid ah qaraxyada ayaa ka dhacay illinka hore ee hotelka Saxafi iyo xarunta dambi baarista ee CID halka mid kalena uu dhacay wada yar oo marta dhabarka dambe ee hoteelka. Dadka dhintay waxaa kamid ahaa Milkiilihii hoteelka Saxafi Cabdifitaax Cabdirashiid Ilqeyte oo ganacsigan...
Madaxweyne Farmaajo oo berito ku wajahan Itoobiya
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa berito u amba baxaya dalka Itoobiya,sida uu sheegay xafiiska warfaafinta ee madaxtooyadda Soomaaliya. Cabdinuur Maxamed Axmed oo ah agaasimaha warfaafinta madaxtooyadda ayaa qoraal uu soo dhiggay bartiisa Twitter waxa uu Ku sheegay in madaxweynuhu uu berito safar u yahay magaalada...
Janaraal Berhanu: Ma jirto Sabab ay Itoobiya Bad la’aan u sii ahaato
Xukuumadda Addis Ababa ayaa wada qorshe ballaaran oo ay Ku dhisayan ciidamaddooda badda iyada oo aysan Itoobiyana lahayd wax bad ah. Janaraal Berhanu Julu oo ah taliye Ku xigeenka madaxa ciidamadda qalabka sidda ee Itoobiya ayaa sheegay in Itoobiya ay dalal badan Kala tala tashaneyso saldhig ciidamadda Cirka oo ay ka dhiseyso badda Cas iyo Badweynta Hindiya. ” Ma...
Muqdisho: Xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Hirshabelle oo qarax lagu dilay
Alle ha u naxariistee Xildhibaan Cabdiweli Maxamed Ibraahim oo loo yaqaanay Garweyne ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray qarax loogu xiray gaarigiisa. Qaraxa ayaa galabta ka dhacay agagaarka Baanka IBS ee degmada Xamarweyne,sida ay good joogayaal sheegen. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in darawalkii xildhibaanka oo qaraxa ka bedbaaday la la’yahay....
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadiyay is-fahamka ay gaareen dhinacyada Galmudug oo maalmahan u joogay magaalada Muqdisho xal u helista khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex jiray. Madaxweynaha ayaa yiri “Keddib wada-tashiyo aan la yeeshay dhinacyada ay khuseyso dib-u-heshiisiinta Galmudug, waxaan xalay ka gaarnay...
Rag hubeysan ayaa saakay waxa ay duleedka Magalada Muqdisho ku dileyn Nin Oday ah,kadib markii ay wadada u galeyn Gaari nooca raaxada ah oo uu watay kadibna ay rasaaseeyeen,waxana Ninkaas lagu Magacaabi jiray Sheekh Cabdullaahi Maxamed Rooble. Falkan dilka ah ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxeysa Tareedisho iyo Tabeelaha Sheekh Ibraahim,waxana eheladiisa ay sheegeen in...
Dowladda Norway ayaa Maanta si Rasmi ah u aqoonsatay Baasaboorka Soomaalia Kadib dedaallo soo socday muddo oo maanta miro dhalay. Kulan Nairobi ku dhexmaray Mas’uuliyiin ka kala socotay dowladdaha Soomalia iyo Norway ayaa lagu shaaciyay in maanta wixii ka dambeeyo dalka Norway ay si Rasmi ah u aqoonsatay Baasaboorka Soomalia oo mudadii dalka uu burburka ku jiray...
King Salman invites Somali President to AIU Summit - 21643 views
The Future of Somalia - 2853 views
Hijab is my right - 1610 views
AKHRISO: Taariikhda Wasiirrada cusub ee la magcaabay - 1412 views
DHAGEYSO: Madaxweynihi Hore Cabdiqaasim Salaad oo Mucaaradka iyo Muxaafadka Fariin u diray - 1343 views
Axmed Madoobe oo ku dhawaaqay Howlgal Al shabaab looga Saarayo gobolka Jubadda Hoose - 1308 views
Soomaaliland oo Imaaraadka ku wargalisay in uu hakiyo Saldhiga Dekeda Ber Bera - 1250 views